Ukukhiqiza: IRubrik | "Esheshayo, Eshibhile, Elihle" Martech Zone
NgoMgqibelo, ngoMeyi 29, 2010 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 URobby Slaughter
Inqobo nje uma bekukhona abaphathi bamaphrojekthi, kube khona iqhinga elisheshayo nelingcolile lokuchaza noma iyiphi iphrojekthi. Ubizwa ngokuthi umthetho we “Fast-Cheap-Good”, futhi kuzokuthatha cishe imizuzwana emihlanu ukuqonda.
Kuyashesha, kushibhile noma kuhle: Khetha noma yikuphi okubili.
Inhloso yalo mthetho ukusikhumbuza ukuthi yonke imizamo eyinkimbinkimbi idinga ukuhweba. Noma nini lapho sithola inzuzo endaweni eyodwa ngokungangabazeki kuzoba nokulahlekelwa kwenye indawo. Ngakho-ke kusho ukuthini okushibhile-okuhle-okuhle kubafundi beMartech? Ake sihambe no konke.
Incazelo yokushesha, eshibhile nokuhle
Sonke sinomuzwa wejubane. Kuyimpelasonto yomjaho lapha e-Indianapolis, futhi imoto esheshayo iyanqoba. Akunandaba ukuthi iyiphi iphrojekthi ozama ukuyifeza, noma ngabe ukugunda utshani noma ukuya enyangeni, sonke sifuna kwenziwe ngokushesha okukhulu. Vele, kwesinye isikhathi ijubane akuyona yonke into. Amanye amaholide amahle kakhulu yilezo lapho silibala khona. Eminye imikhiqizo ephumelela kakhulu yilezo lapho abasiki bengakhathazeki ngokufika emakethe kuqala kepha benze umsebenzi ongcono. Futhi imvamisa, ukushesha ukuchitha izinsiza. Phela izimoto zakwa-Indy zifika kuphela 1.8MPG.
Futhi impela, kuhle ukonga imali. Ungacela ibutho lamavolontiya kanye nabaqeqeshwayo ukuba bazame ukukhiqiza okuthile, futhi bavame ukuthola imiphumela emangazayo. Kodwa-ke ngokunciphisa izindleko sizibeka engcupheni yokudela ikhwalithi. Ukusesha zonke lezo zindawo zokonga kuthatha isikhathi. Ekugcineni, indlela yokuba nomphumela omuhle kakhulu ukuqinisekisa ukuthi isikhathi nemali akuyona into. Umsebenzi osezingeni eliphakeme uhlala utholakala lapho sinezinsizakusebenza ezingapheli.
Kuyashesha, Kushibhile, Kuhle futhi Ukukhiqiza
Lo mthetho wesithupha kwesinye isikhathi ubonakala usobala kancane. Sonke siyazi ukuthi kukhona ama-tradeoff kunoma iyiphi iphrojekthi. Noma kunjalo, njengoba UDoug Karr ngiveze nje, ukulinganiswa kwephrojekthi kubuhlungu. Lokho kungenxa yokuthi amaklayenti azosibeka njalo ogibeni lokuzama ukuletha okuthile okusheshayo, okushibhile futhi okuhle konke ngasikhathi sinye.
Lokhu akunakwenzeka. Yisizathu sokuthi isikhathi esinqunyiwe sishelele, amaphrojekthi adlula isabelomali futhi ikhwalithi ihlupheka. Kufanele wenze ama-tradeoffs.
Akunandaba nosayizi wephrojekthi, umthetho oshibhile osheshayo ubalulekile. Uma ungumklami wezithombe osebenza ku-Photoshop, ungonga isikhathi ngokungazigcini izingqimba zakho zihlukile futhi zihlelekile. Uma uzama ukunciphisa izindleko ekumaketheni kwakho kwe-imeyili, ungadela ikhwalithi ngokuzama ukukwenza endlini (noma udele ukuphuthuma ngokusebenzisa umhlinzeki wezentengiso we-imeyili othunyelwe ngaphandle.) Uma unganaki ukuthayipha okumbalwa ku-athikili yakho, uzozuza ngokuyikhiqiza ngokushesha okukhulu nangabizi. Ama-tradeoffs kulula ukuwabona.
Ehhovisi lakho, ungasebenzisa umthetho oshibhile-omuhle kokuningi kunokumane wenze izinqumo. Ungayisebenzisa futhi ukuxhumana phakathi kwababambiqhaza. Lapho abantu becela ukuthi kwenziwe umsebenzi ngokushesha, ungababuza ukuthi bangathanda yini ukudela ikhwalithi noma bakhokhele izindleko ezikhuphukile. Uma othile efuna ukwazi ngezinketho ezingabizi kakhulu, babuze ukuthi bangathanda yini ukubona izinketho ezixhuma ukonga ezintweni ezimbalwa noma kumjikelezo wentuthuko omude.
Uthola umqondo. Sebenzisa okusheshayo-okushibhile-okuhle! Kuyindlela enamandla yokuqonda uhlobo lokuphathwa kwamaphrojekthi, ukukhiqiza kanye nokusebenzisana kwababambiqhaza.
Tags: ezishibhilefasteshibhile okuhle okuhleokuhleintengoikhwalithi yejubane lentengoUkukhiqizaizingai-rubrikijubane